हृदय: पहिलो (सिस्टोलिक), दोस्रो (diastolic) - आदर्श र विकृति
पहिलो phonendoscopes ट्यूब पानाहरू वा खोक्रो बांस लाठी जोडेको थियो, र धेरै डाक्टर मात्र आफ्नै सुनुवाइ प्रयोग गर्नुहोस्। तर तिनीहरू सबै के यो हृदय जस्ता महत्वपूर्ण निकाय आउँछ विशेष गरी जब मानव शरीर भित्र जाँदै थियो सुन्न चाहन्थे।
हृदय सुनिन्छ - myocardial पर्खाल कम को प्रक्रिया मा उत्पादित गर्दै छन् कि ध्वनि। सामान्यतया, एक स्वस्थ व्यक्ति रोग प्रक्रिया कस्तो विकास आधारमा थप ध्वनि सँगसँगै हुन सक्छ जो दुई-टोन, छ। कुनै पनि विशेषता मा चिकित्सक यी आवाजहरू सुन्न र तिनीहरूलाई व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
हृदय प्रति मिनेट देखि साठी गर्न असी Beats एक आवृत्ति मा धड्किन्छ। यो, पाठ्यक्रम, औसत मूल्य, तर ग्रह जसको अर्थ, यो अन्तर्गत गिरावट मा मान्छे को नब्बे प्रतिशत तपाईं आदर्श रूपमा लाग्न सक्छ। systole र diastole: प्रत्येक शट दुई क्रमिक घटक हुन्छन्। सिस्टोलिक हृदय ध्वनि, बारी मा, आलिन्द र बाहिरु निलय विभाजन गरिएको छ। समय यसलाई 0.8 सेकेन्ड लाग्छ, तर हृदय अनुबंध र आराम गर्न समय छ।
माथि उल्लेख रूपमा, दुई घटक हुन्छन्। सुरुमा, आलिन्द systole छ: आफ्नो सम्झौता को पर्खालहरु, दबाब रगत को ventricles, वाल्व र शटर स्ल्याम प्रवेश गर्छ। यो वाल्व बन्द ध्वनि थियो र स्टेथोस्कोप मा सुने। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया 0.1 सेकेन्ड लाग्छ।
त्यसपछि atria संग मामला छ भन्दा धेरै जटिल अपरेसन छ जो बाहिरु निलय systole, आउँछ। 0.33 सेकेन्ड - सुरु गर्न, हामी प्रक्रिया तीन पटक लामो समय लाग्छ भनेर याद गर्नुहोस्।
पहिलो अवधि - को ventricles को भोल्टेज। यो चरण असिन्क्रोनस र isometric contractions समावेश छ। यो सबै myocardium, त्यो व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर excites र तिनीहरूलाई spontaneously अनुबंध गराउँछ संग इलेक्ट्रिक नाडी propagates भन्ने तथ्यलाई सुरु हुन्छ। यस कारण, यो हृदयको आकार परिवर्तन गरिएको छ। गर्न atrioventricular वाल्व दबाब बढ्दै, कस बन्द छन् कारण। त्यसपछि ventricles बलियो संकोचन छ, र रगत को महाधमनी वा पल्मोनरी धमनी प्रवेश गर्छ। यी दुई चरणहरु लिन 0.08 सेकेन्ड र 0.25 सेकेन्ड रगतमा बाँकी मुख्य जहाजहरु प्रवेश गर्छ।
यहाँ पनि, यो यति सजिलो यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ जस्तो छ। बाहिरु निलय विश्राम 0.37 सेकेन्ड रहन्छ र तीन चरणमा स्थान लिन्छ:
Protodiastolic: रगत हृदय बाँकी पछि, आफ्नो गुहा मा दबाव कम छ र ठूलो जहाजहरु गर्न अग्रणी वाल्व, बन्द छन्।
Isometric विश्राम: मांसपेशिहरु आराम दबाब थप पतन र आलिन्द संग पङ्क्तिबद्ध, जारी छ। को ventricles यो atrioventricular वाल्व खुला छ, र atria देखि रक्त देखि पर्छ।
को ventricles को भरने: को तरल पदार्थ साथ दबाब ढाल तल्लो भरिन्छ हृदयका Chambers। दबाब equalized हुन्छ, रगत प्रवाह बिस्तारै तल slows र त्यसपछि रोक्छ।
चक्र त्यसपछि systole सुरु हुने, फेरि दोहोर्याइएको छ। यसको अवधि सधैं नै छ, तर diastole छोटो वा lengthened गर्न सकिन्छ हृदय दर आधारमा।
म टोन को गठन को संयन्त्र
रूपमा अनौठो यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, हृदय को 1 टोन चार घटक हुन्छन्:
वाल्व - यो एक ध्वनि शिक्षा को लागि अग्रणी छ। वास्तवमा, यो घटबढ बाहिरु निलय systole को अन्त मा atrioventricular वाल्व पत्रक।
मांसपेशी - संकोचन बेला ventricles को oscillatory गति।
भास्कुलर - आफ्नो रक्तचाप खस्दा एक समयमा मुख्य पोत पर्खाल stretching।
आलिन्द - आलिन्द systole। पहिलो पिच को यो तत्काल शुरुवात।
गठन द्वितीय टोन र अतिरिक्त टन को संयन्त्र
एक वाल्व र भास्कुलर: त्यसैले,2टोन हृदय मात्र दुई घटक समावेश छ। पहिलो - यो वाल्व कला र पल्मोनरी ट्रंक एक समयमा रगत Beats आउँछ कि तिनीहरू अझै पनि बन्द गर्दा ध्वनि छ। को flaps अन्तिम खोल्न गर्दा ठूलो जहाजहरु पर्खालहरु को एक आन्दोलन, - दोस्रो, यो एक भास्कुलर घटक छ।
यसबाहेक दुई प्रमुख, अझै भेद टन3र 4।
तेस्रो टोन - diastole समयमा बाहिरु निलय myocardium एक घटबढ, रगत कम दबाव को एक क्षेत्र मा passively बग्छ जब।
चौथो टोन systole को अन्त मा देखिन्छ र atria देखि रगतको Expulsion को अन्त संग सम्बन्धित छ।
विशेषता म टोन
हृदय धेरै कारक, intra- र extracardiac दुवै भर पर्छन्। 1 sonority टोन को myocardium को उद्देश्य राज्य मा निर्भर गर्दछ। यसरी, पहिलो मात्रा मा हृदय वाल्व को तंग बन्द र ventricles कम छन् जो मा दर द्वारा प्रदान गरिएको छ। यस्तो atrioventricular वाल्व को flaps घनत्व साथै हृदय गुहा मा आफ्नो स्थिति रूपमा माध्यमिक सुविधाहरू छलफल।
को sternum को बाँया 4-5 intercostal ठाउँ मा - यो पहिलो हृदय ध्वनि यसलाई माथि सुन्न सबै भन्दा राम्रो छ। थप सही लागि यो क्षेत्र मा छाती को टक्कर गर्न आवश्यक समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ र स्पष्ट हृदय सुस्ती को सीमाहरु परिभाषित गर्न।
विशेषता पिच द्वितीय
उसलाई के सुन्न, यो हृदय आधार अधिक घण्टी स्टेथोस्कोप राख्न आवश्यक छ। यो बिन्दु को sternum को xiphoid प्रक्रियाको सही गर्न अलिकति छ।
दोस्रो टोन को मात्रा र स्पष्टता पनि वाल्व बन्द कसरी कस निर्भर मात्र अब semilunar छ। साथै, बन्द छ, आफ्नो कामको गति र oscillation को निःशुल्क समाप्त प्लेब्याक ध्वनि असर गर्छ। र अतिरिक्त गुण टोन को गठन संलग्न सबै संरचना को घनत्व, साथै हृदय देखि रगतको expulsion बेला वाल्व को स्थिति हो।
हृदय ध्वनि को नियम auscultation
हृदयको आवाज शायद सबैभन्दा सेतो हल्ला पछि, संसारमा शान्त छ। वैज्ञानिकहरूले आफ्नो बच्चा utero मा सुन्नुहुन्छ यो थियो hypothesized छन्। तर यो कसरी कुट्छ सुन्न, हृदयमा क्षति पत्ता लगाउन क्रममा, यो पर्याप्त छैन।
मुख्यतया auscultation मा लगे एक शान्त र न्यानो ठाउँ आवश्यक छ। मानव को पोज तपाईं अधिक ध्यान दिएर सुन्न आवश्यक वाल्व कस्तो निर्भर गर्दछ। यो आफ्नो बायाँ छेउमा झूट, ठाडो को स्थिति हुन सक्छ, तर सही पक्षमा अगाडी लगाइदिए आवास, र यति मा संग। डी
रोगी दुर्लभ र खोक्रो साँस हुन, र आफ्नो सास पकड गर्न चिकित्सकको अनुरोध अनुसार गर्नुपर्छ। क्रममा स्पष्ट बुझ्न जहाँ systole र चिकित्सक को carotid धमनी नाडी को सिस्टोलिक चरण संग सम्पूर्ण coincides जो palpate सुनेर संग समानान्तर गर्नुपर्छ जहाँ diastole।
हृदय auscultation क्रम
हृदय सुनिन्छ गर्न निरपेक्ष र सापेक्ष हृदय सुस्ती डाक्टर को एक प्रारम्भिक अठोट पछि सुन्नुहुन्छ। यसलाई शीर्ष शरीर संग, नियम, सुरु हुन्छ। राम्रो त्यहाँ mitral वाल्व श्रव्य छ। त्यसपछि ठूलो धमनिहरु को वाल्व उत्प्रेरित। को aortic गर्न पहिलो - एउटै स्तरमा, बस बायाँ - दोस्रो intercostal त्यसपछि पल्मोनरी धमनी गर्न sternum को सही, ठाउँ मा।
सुन्न लागि चौथो बिन्दु - यो हृदयको आधार हो। यसलाई आधार मा स्थित छ को xiphoid प्रक्रिया, तर छेउमा गर्न सारे गर्न सकिन्छ। यस चिकित्सक हृदय र विद्युत अक्ष को के फारम जाँच गर्नुपर्छ भनेर सही tricuspid वाल्व सुन्न।
Botkin-Erba मा auscultation गोलाई। तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ को aortic वाल्व। यो sternum बायाँ मा चौथो intercostal ठाउँ छ।
हृदय ध्वनि सधैं छैन ताल क्लिक सम्झना दिलाउँछ। कहिलेकाहीं, मनमोहक हुनेछ भन्दा बढी अक्सर, यो विचित्र प्रकारका लाग्छ। यी डाक्टर केही सुनेर बस पहिचान गर्न सिकेका छन्। यी समावेश:
- यो mitral वाल्व क्लिक गर्नुहोस्। उहाँले हृदयको शिखर नजिकै सुने गर्न सकिन्छ, यो वाल्व पत्रक को जैविक परिवर्तन संग सम्बन्धित र जब प्राप्त हृदय दोष मात्र देखिन्छ छ।
- सिस्टोलिक क्लिक। mitral वाल्व अर्को प्रकार। यस मामला मा, यो flaps systole समयमा बाहिर भित्र गरिएका भने, कस बन्द छन्।
- Perekardton। को टास्ने pericarditis गर्दा फेला परेन। को लंगरगाह रेखा भित्र गठन भएको कारण ventricles को अत्यधिक dilation सम्बन्धित।
- धमकी दिन को ताल। त्यहाँ mitral stenosis, पहिलो टोन को स्पष्ट वृद्धि, को पल्मोनरी धमनी र mitral वाल्व क्लिक मा दोस्रो टोन जोड।
- gallop। यसको घटना को कारण यो पृष्ठभूमिमा tachycardia मा देखिन्छ, myocardial टोन कम छ।
Extracardiac प्रवर्धन र attenuation टन गराउँछ
हृदय विश्रामहरू र बिदा बिना जीवन को लागि शरीर मा धड्किन्छ। त्यसैले, जब यसलाई पहनता छ, आफ्नो काम को मापन ध्वनि एक्स्ट्रानिअस देखिन्छन्। यो कारण कि त सीधा मनमा बिगार्न लिङ्क हुन सक्छ, र यो निर्भर छैन।
टन बलियो योगदान:
- cachexia, anorexia, पातलो छाती पर्खाल;
- पल्मोनरी atelectasis वा तत्संबंधी भाग;
- यो posterior mediastinum मा सुनिंनु, सजिलै सार्न;
- यो फोक्सोमा तल्लो lobes घुसपैठ;
- यो फोक्सोमा मा bullae।
हृदय को कमजोर सुनिन्छ:
- अत्यधिक वजन;
; को छाती पर्खाल को मांसपेशिहरु को विकास -
- उपचर्म वातस्फीति;
- यो thoracic गुहा मा तरल पदार्थ को उपस्थिति;
- Exudative pericarditis।
हृदय टन को बलियो बनाउँछ र कमजोर लागि Intracardiac कारण
हृदय स्पष्ट, व्यक्ति बाँकी वा सुत्दा छ ताल गर्दा। यसलाई सारिएको थियो भने, उदाहरणका लागि, उहाँले सिढी डाक्टर कार्यालय गर्न चढेका, यो एक हृदय ध्वनि प्रवर्धन हुन सक्छ। साथै, मुटुको दर को प्रवेग रक्तअल्पता, endocrine रोगहरु, आदि कारण हुन सक्छ
बहिरा हृदय ध्वनि सुने छ प्राप्त हृदय रोग, यस्तो mitral वा रूपमा aortic stenosis, वाल्व को अपर्याप्तता। चाप, को घटते भाग को आरोही भाग: आफ्नो योगदान आफ्नो हृदय नजिक छन् कि विभाग मा aortic stenosis ल्याउँछ। Muffled मनमा degeneration वा काठिन्य गर्न प्रमुख, वृद्धि myocardial ठूलो, साथै हृदय को मांसपेशी को भडकाऊ रोगहरु सम्बन्धित लाग््छ।
रंग बाहेक, डाक्टर अन्य ध्वनि, तथाकथित हल्ला सुन्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले हृदयको गुहा मार्फत बित्दै जो रगत प्रवाह को कोलाहल देखि गठन गर्दै हुनुहुन्छ। सामान्यतया, तिनीहरूले हुँदैन। सबै ध्वनि जैविक र कार्यात्मक भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
अंग anatomical को वाल्व सिस्टम मा, अपरिवर्तनीय परिवर्तनहरू देखा गर्दा जैविक देखिन्छन्।
बिगडा ताकत आपूर्ति वा शक्ति papillary मांसपेशीमा, हृदय दर र रगत प्रवाह दर, यसको चिपचिपाहट मा एक कमी सम्बन्धित कार्यात्मक हल्ला।
शोर हृदय ध्वनि साथ दिनु गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई स्वतन्त्र हुन सक्छ। कहिलेकाहीं भडकाऊ रोगहरु मा pleural घर्षण हृदय मा superimposed छ, र त तपाईं आफ्नो सास पकड रोगी सोध्न र auscultation पकड फेरि अगाडि leaned। यो सरल प्रविधी गल्ती जोगिन मदत गर्न सक्छ। बल, अवधि र निर्देशन: सामान्यतया, जो तिनीहरूले उत्पन्न हृदय चक्रको चरण मा, सबै भन्दा राम्रो स्थान फेला पार्न र सुन्न हल्ला विशेषताहरु संकलन गर्न निर्धारण रोग प्रयास को हल्ला सुनेर गर्दा।
Timbre हल्ला धेरै प्रकार छन्:
- नरम वा उड्ने (सामान्यतया विकृति संग, अक्सर बच्चाहरु मा सम्बन्धित छैन);
- कुनै न कुनै, scraping र काटन कार्य;
अवधिको लागि प्रतिष्ठित:
- (विशेष गरी बायाँ atrioventricular orifice को साँघुरो मा) बढ्दै;
हृदय गतिविधि को चरणहरु को एक समयमा लिपिबद्ध मात्रा परिवर्तन गर्न।
- उच्च (जब aortic stenosis);
- कम आवृत्ति (mitral stenosis)।
त्यहाँ auscultation हल्ला केही सामान्य ढाँचाहरू छन्। पहिलो, तिनीहरूले वाल्व को स्थानहरू गर्न, कारण तिनीहरू गठन थिए जो को विकृति सुने। दोश्रो, को हल्ला छैन यो विरुद्ध radiating रगत प्रवाह को निर्देशन। र तेस्रो, हृदय सुनिन्छ रूपमा, असामान्य ध्वनि सर्वश्रेष्ठ जहाँ मन उज्यालो ढाकिएको छैन र छाती गर्न कस adherent सुने छन्।
सिस्टोलिक murmurs को ventricles देखि रगतको प्रवाह सजिलो र छिटो, र diastolic हुन्छ किनकी, supine स्थिति सुन्न राम्रो छ - किनभने गुरुत्वाकर्षण को शक्ति अन्तर्गत बसिरहेका, को atria देखि ventricles गर्न तरल छिटो पर्छ।
हल्ला आफ्नो स्थान र हृदय चक्र चरण अनुसार फरक गर्न सकिन्छ। यदि एउटै ठाउँमा हल्ला systole र diastole मा देखिन्छ, यो वाल्व को संयुक्त घाउ बताइएको छ। हल्ला एक बिन्दुमा systole देखा भने, र diastole मा - अन्य - यो पहिले नै दुई वाल्व को एक संयुक्त हानि छ।
एक herniated डिस्क संग अभ्यास
सरल प्रश्न: कसरी "slushalka" डाक्टर भनिन्छ?
नवजात स्क्रीनिंग र वंशानुगत रोग को प्रारम्भिक पत्ता लगाउनको लागि यसको महत्व
को खुट्टा मा दुखाइ
कति मूल अप बढ्छ बारेमा प्रश्न जवाफ? ठूलो धेरै!
विवाह छल्ले मा मूल उत्कीर्णन - लोयल्टी र प्रेमको प्रतीक
शुरुआती र अनुभवी कलाकार लागि: चरणमा मा परिदृश्य पेंट्स कसरी आकर्षित गर्न
रचनात्मकता को आधार - मोडेलिंग को लागि नमकीन आटा
Mogilev Diocese - विश्वास को एक शान्त द्वीप
भेट्यो आक्षेप - पानी को कुनै पनि शरीर को एक आभूषण
समुद्र इटाली को मुख्य रिसोर्ट्स
"रियो" ekzopark: ठेगाना, विवरण, फोटो
को Kremlin मा Mackintosh प्रदर्शनी: "नयाँ शैली को मेनिफेस्टो"
पर्खाल वक्ता: प्रजाति चयन, बन्धन